Yintoni i-gut microbiota? Iingcebiso ezi-3 zokuphucula | IBezzia
Yintoni i-gut microbiota? Iingcebiso ezi-3 zokuphucula
UToñy Torres | 12/10/2021 20:00 | Iingcebiso zezempilo
Ngokuqinisekileyo ngaphezulu kwesihlandlo esinye uvile ngeentyatyambo zamathumbu kunye nendlela ekubaluleke ngayo ukuyikhusela ukuze ube sempilweni. Ewe, into eyaziwa ngokuba ziintambo zamathumbu emathunjini, yile nto ibizwa ngokwamathumbu emathunjini. Intsingiselo yeli gama ngokusisiseko ingqokelela (enkulu) yeentsholongwane ezihlala emathunjini.
I-gut microbiota yenziwe nge-trillion ye-microorganisms ezinjengebhaktheriya, ii-virus, i-fungi kunye ne-parasites. Phakathi kwemisebenzi ye-microbiota yile ukufunxa icalcium kunye nentsimbi, kuvelisa amandla kwaye kuyasikhusela ekuhlaselweni Ukusuka kwezinye iintsholongwane kunye neentsholongwane ezinokuthi zibe zezifo. Ukongeza ekufezekiseni imisebenzi eyahlukeneyo kuphuhliso lwamajoni omzimba.
1 Yintoni i-gut microbiota kwaye yenziwa njani
1.1 Ungayiphucula njani i-microbiota
Yintoni i-gut microbiota kwaye yenziwa njani
I-gut microbiota yahluke mpela emntwini ngamnye, ulwakhiwo olwahlukileyo olwenziwa ngexesha lokubeleka. Unina uhambisa zonke iintlobo zentsholongwane ngexesha lokuhanjiswa, ngelungu lobufazi kunye nelindle xa kufikwa kunikezelo lobufazi. Okanye ii-microorganisms ezisemgangathweni xa kuziwa kukuhanjiswa kwe-cesarean. Oko kukuthi, i-microbiota iqala ukwenzeka ukusuka ngexesha lokuzalwa.
Nangona kunjalo, ngalo mzuzu uqala inkqubo eya kuthatha iminyaka ukuyigqiba. Ngexesha lokuqala kweminyaka emi-3 yobomi, iintsholongwane ezenza i-microbiota yamathumbu ziyahluka. Kwaye kude kube mdala, oku kuyantlukwano kunye nokuzinziswa kuya kuqhubeka, oko kukuthi iya kuya isiba mandundu ibe iya isiba mbi njengoko ifikelela ebudaleni. Imisebenzi ye-microbiota ibalulekile kwaye ke ngoko kubaluleke kakhulu ukuyiphucula kwaye uyikhusele ubomi bakho bonke.
Imisebenzi ye-microbiota yempilo yabantu ibalulekile, enyanisweni, ithathwa njengelungu elisebenzayo lomzimba. Olu lwakhiwo lwee-microorganisms lusebenza ngokudibeneyo kunye namathumbu kunye izalisekisa imisebenzi emine emikhulu.
Ukuququzelela ukwetyisa: inceda amathumbu ukuba ukufunxa izondlo ezifana neeswekile, iivithamini okanye ii-acid ezifanelekileyo, phakathi kwezinye.
Kubalulekile kuphuhliso lwenkqubo yokwetyisa: Ngexesha lokuqala lesigaba sobuntwana nakwiintsana, i-microbiota isabuthathaka kwaye inkqubo yokwetyisa ayikhulanga. Ke ngoko, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ekhethekileyo iintsholongwane ezingangena kwinkqubo yosana ngokutya, ngamanzi okanye ngokudibana nemimandla emdaka.
Yenza isithintelo sokukhusela: Ukuqobisana ezinye iintsholongwane ezisongelayo Izinto eziphilayo zihlala emzimbeni womntu.
Yomeleza ukhuseleko: i-microbiota yamathumbu inceda yomeleza amajoni omzimba, esikhusela kwiintsholongwane.
Ungayiphucula njani i-microbiota
Kukho iindlela ezininzi zokuphucula kunye nokomeleza i-microbiota yamathumbu, kuba imalunga nokwenza uhlobo lwefuthe kuluntu lwee-microorganisms, ukuphucula impilo yabo ukuze bakwazi ukufeza imisebenzi yabo ngokuchanekileyo. Indlela yokuphucula Iintyatyambo zamathumbu es isixa-mali sezikhokelo zilandelayo:
ukondlaUkusetyenziswa kokutya kwendalo, ngaphandle kwezinto eziyingozi ezinokonakalisa impilo ye-microbiota. Landela, qhubeka ukutya okwahlukeneyo, okuphakathi kunye nokuphakathi apho ukutya kwendalo kuninzi, yeyona ndlela ilungileyo yokugcina impilo kuwo onke amanqanaba.
Iiprobiotic: Bazi ukutya okanye izongezo ezinee-microorganisms eziphilayo ezisebenza ukuphucula nokugcina iintyatyambo zamathumbu.
Prebiotics: kule meko kukutya nge umxholo wefayibha ephezulu ebonelela ngezondlo kwi-microbiota yamathumbu.
Umzimba ugcwele iintsholongwane eziphilayo ezihlala kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba, njengolwimi, iindlebe, umlomo, ubufazi, ulusu, imiphunga, okanye umchamo. Ezi zinto zikho kuba zinomsebenzi othile kwaye ubalulekile kwimeko nganye nakwi ukonwabela impilo elungileyo kufuneka ukhusele iintsholongwane emzimbeni. Landela ukutya okunotye iziqhamo kunye nemifuno, kunye nokutya okunesinyibilikisi esinyibilikayo, kuba kuthanda ukukhula kunye nomsebenzi wentsholongwane yegciwane emathunjini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » ZeMpilo » Iingcebiso zezempilo » Yintoni i-gut microbiota? Iingcebiso ezi-3 zokuphucula
Ii -apps ezi-3 zokucwangcisa umsebenzi wakho
Eyona mithambo mibi ibuyela umva